Tenga zvakanakira Electric kabhoni fiber bhasikoro | ebike Shuangye
musha Products electric bike electric mountain bike Electric kabhoni fiber bhasikoro 26-inch yakabatanidzwa vhiri A6CB26M
Bhatiri: 36V 10Ah kubvisa bhatiri bhatiri
Magiya: 7/21/27 Matinji
Mabhureki: 160 mechanical mechanical brake
Max Kumhanya: 25k-30m / h
Max Mutoro: 120kg-150kg
Electric kabhoni fiber bhasikoro 26-inch yakabatanidzwa vhiri
Carbon fiber zvakare rakakura bhasikoro furemu zvinhu nekuda kwekuomarara kwayo, simba uye kusagadzikana. Kubva pane iyo feactor ye furemu zvinhu, kabhoni fiber bhasikoro huremu hwakareruka pane aluminium alloy furemu. bhenefiti huru kune vakajairika vatasvi ndiko kukwira comfot ye magetsi kabhoni fiber bhasikoro. Uye iyi yemagetsi kabhoni fiber bhasikoro inouyawo neyaviri-26-inch magnesium alloy yakasanganiswa vhiri. Kana iwe usingade inorema uye yakawanda mota yemagetsi bhasikoro, yemagetsi kabhoni fiber bhasikoro yakakukwanira iwe, inova yakajeka, yakasimba, uye yakasimba.
Iyi yemagetsi kabhoni fiber bhasikoro yakashongedzwa ne250w kana 350w isina mabhureki mota pane kumashure vhiri kuti inatsiridze bhasikoro simba rekuchengetedza vatyairi mamwe simba. Motokari yemagetsi inogadzira kabhoni yemagetsi kabhasiketi nyore kusvika padanho rakakura 25-30km / h. Kunyangwe kana kumhanya kwakakwira kana kukwira kukwira chikomo, mota inogara ichipa simba rakaringana kune vatasvi kuti vawane zvavanoda zvekukwira.
36v bhodhoro lithiamu bhatiri inoita iyi kabhoni fiber bhasikoro inogona kukwira inosvika ku40-60km pamutero mumwe chete. Taura nekuchaja, Izvo zvakare zviri nyore kwazvo kubhadharisa bhatiri nekuda kwekubvisa dhizaini. Ingoburitsa bhatiri nekiyi wobva watsvaga socket yekuchaja neyakapihwa 42V 2A charger, iyo nguva yekuchaja ingangoita maawa mashanu kusvika mashanu.
Ratidza uye Handlebar
Kuti vatasvi vazive bhasikoro kuchovha chaiyo-nguva ruzivo, iyi yemagetsi kabhoni fiber bhasikoro yakagadzirirwa ine isingaite mvura LCD inoratidzira iyo yakaiswa pakati pechibato, iwe unogona kuziva inoramba iri bhatiri simba, tembiricha, kumhanyisa kumhanya, chaiyo-nguva mota simba, rwendo rwakazara, uye nezvimwe. Zvichienderana neruzivo, iwe unogona kugadzirisa yako yekutasva hurongwa. Pane 21 yekumhanya yakabatana shifter uye mabhureki mabhureki anoita kuti ridre ichinje magiya zviri nyore uye ikapwanya bhasikoro. Icho chigunwe chinobatanidza chinobatanidza Pedal-Batsira maitiro kuunza vatasvi vaviri kukwira sarudzo.
Kuti uve nechokwadi cheumwe mutasvi akatasva kuchengetedzeka, tora ne 160 michina disc bhureki kumberi uye kumashure vhiri. Kunyangwe kana kuri kunyorova kana kutonhora mamiriro ekunze kana emergency mamiriro. inogona pakarepo kupa simba rakasimba rekusimudza bhasikoro Iko zvakare kune yekukasira kuburitswa yakaiswa pamberi pevhiri, zviri nyore kubvisa vhiri repamberi kana iwe uchida. Kunze kwekunge mechancial disc brake, pane michina disc brake inogona kusarudzwa.
Magnesium alloy inosanganisa vhiri zvakanyanya kuomarara, bata yakakwira kumhanya uye yakakwira huwandu hwesimba remabhiza uye torque zvine hukama nyore. Iko kusimba, kusanzwisisika kunoitawo kuti magnesium alloy yakasanganiswa mavhiri iwedzere kufungidzira mukutasva, kunyanya pakakwirira pakona kumhanya uko kugadzikana uye kuenderana kuri kwakanyanya.
Kana iwe uchida kabhoni fiber yemagetsi bhasikoro, taura nesu ndapota.
Mamwe mabhasikoro emagetsi: 29-inch yakabatanidzwa vhiri yemagetsi mtb, gomo rakakurumbira ebike, 26 ″ mafuta aneta bhasikoro remagetsi, 26/28 inch bhasikoro remagetsi bhasikoro
Tags:kabhoni fiber bhasikoro yemagetsi yemagetsi kabhoni fiber mabhasikoro
Prev: 29 * 2.35 inch magetsi anobatsira bhasikoro gomo revakuru A6AH26